Ukufa, ukonzakala, nomonakalo ochazwe njengeyona nyikima iphambili eHaiti
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseHaiti » Ukufa, ukonzakala, nomonakalo ochazwe njengeyona nyikima iphambili eHaiti
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseHaiti • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Amaziko Esilumkiso ngeTsunami aseMelika akhupha isoyikiso, kodwa eso songelo sapheliswa kungaphelanga neyure.
Inyikima enkulu itshabalalisa iHaiti.
Iingxelo ezingaqinisekiswanga zibonisa ukufa kunye nokulimala okuninzi.
Isilumkiso seTsunami sikhutshiwe, kodwa sarhoxiswa kwakamsinya emva koko.
Inyikima enkulu, enamandla ngaphezu kwenyikima eyenzakalise u-2010, ihlasele iHaiti ngentseni yangoMgqibelo, yabangela umonakalo omkhulu kumazantsi elizwe laseCaribbean.
Uphando ngejoloji yase-US lubeke ubukhulu benyikima kubukhulu obungu-7.2, okanye “obukhulu.” Eyona ndawo yenyikima yayiyi-12km (7.5 yeemayile) kumantla mpuma eSaint-Louis-du-Sud, idolophu enabemi abangaphezu kwama-50,000 XNUMX.
Iingxelo ezingaqinisekiswanga zibonisa ukufa kunye nokulimala okuninzi. I-USGS yathi "amaxhoba aphezulu kunokwenzeka kwaye intlekele inokubanda" Haiti.
Kuxelwe umonakalo omkhulu eHaiti, enemifanekiso evela kwidolophu ekufuphi yaseJeremie ebonisa izakhiwo ezonakeleyo kunye nezitalato ezithe saa.
Ividiyo evela kuJeremie ibonise amafu angqindilili othuli egcwalisa izitrato, njengoko izindlu zibhodlokile.
Abanye abantu abathumela kumajelo eendaba ezentlalo baxele inyikima ikude njengeJamaica, kunye Amaziko Esilumkiso ngeTsunami yaseMelika wakhupha isisongelo se-tsunami kungekudala emva koko. Nangona kunjalo, isoyikiso saphakanyiswa kungaphelanga neyure.
Inyikima yahlasela imizuzu embalwa emva kwenyikima enkulu eyahexa iSingasiqithi saseAlaska. Nangona kunjalo, inyikima yaseAlaska yahlasela indawo enabemi abambalwa kakhulu, apho umonakalo wawusezantsi kakhulu.